कतिले भरे आजसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ? अझै २ दिन बाँकी – Eps Sathi
January 17, 2021 999
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेका अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेको छ। आइतबार अर्थात आज सम्ममा ९ करोड ९४ लाख ६ हजार ७४० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ। कुल ८ लाख २ हजार ७०८ जना लगानीकर्ताले ९ अर्ब ९४ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका हुन्। यो आवेदन कुल मागसंख्या भन्दा करिब १.३१ गुणा बढि हो।
Posted in भिडियो, मनोरंजन, राशिफल, रोचक, समाचार, सेयर बजार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
Prevचन्द्रागिरी हिल्सको आइपिओ रिजल्ट कहिले?
Nextफर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले कमायो दोश्रो त्रैमाससम्म ६.२८ करोड इपिएस १४.३४ रुपैयाँ